Nhau - ZR-1620 yakahwina zita re "precision particle counter"!
Muna Kukadzi 2022, chiyero chekuenzanisa che "dust particle counter" chakaitwa muChina.Ichi chiitiko chakarongwa neChina Environmental stoichiometry Technical Committee uye Shanghai Institute yeMetrology uye yekuyedza tekinoroji.Inotarisira kuwana huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hunosangana nezvinodiwa kuburikidza nekuenzanisa, uye inoshandiswa kugadzirisa kukosha kwechiratidzo chechokwadi cheguruva particle counter.
TheZR-1620 dust particle counteryakagadziridzwa naJunray ine kuita kwakanakisa mukuenzanisa uku uye yakaverengerwa se "precision particle counter".Izvi zvinoreva kuti marabhoritari yemetrological inogona kushandisa chiridzwa sechiyero chemetrological cheMetrological traceability yezvakajairwa particle counters.
ZR-1620 dust particle counterinogona kushandiswa kuyedza uye kutonga chiyero chehutsanana chekamuri rakachena muindasitiri yemishonga, indasitiri yemagetsi, imba yekurapa yekurapa, kugadzira chikafu, yakachena workbench, kuyedza kwesainzi, aerospace, kunyatsogadzirisa uye mamwe minda.
Chigadzirwa chacho chinosangana nechiyero cheAppendix B yeJJF1190-2008 《dust particle counter calibration specification》.Sangano rekuyedza rinogona kushandisa chiridzwa ichi sechiyero kuita metrological calibration.
Nguva yekutumira: Mar-15-2022